Matauro / machira → Mbatya dzekusimudzira • nyanzvi P & M embroidery yekombuta
Matauro uye mabhati kushambadzira inzira yakanaka yekushambadzira. Hunhu chaihwo machira, rakasimba uye rakanakisa marogo anogona kuve iwo akakosha kuratidzwa kwekambani. Kazhinji kazhinji inowanikwa mumahotera, nzvimbo dzekutandarira, maspas, dzimba dzekuhodha uye dzimwe nzvimbo zhinji, ivo vanokwidziridza mukurumbira wekambani.
Yakakwirira-kirasi machira ane mucherechedzo anozogutsa izvo zvinodikanwa kunyangwe vatengi vanonyanya kudzvanya Panguva imwecheteyo, ivo vachamira kubva pamakwikwi nekuwedzera kusimba uye kudzikisira mukana wekukuvara.
Inonakidza kubata zvinhu
Izvo zvinhu zvinogadzirwa matauro nemabhati ekushambidza zvakapfava pakubata uye zvakapfava kunyangwe kune ganda rakaomarara. Kutenda kunyaradzo yavanopa kune vashandisi vayo, ivo vanokanganisa maonero eiyo kambani.
Uye zvakare, kana iwe uchibvumira vashanyi kutenga tauro rakadaro nekumaka, mukana wevatengi vanoshanya zvakare unowedzera nekuda kwekuchengetwa kwayo mundangariro yechiratidzo kana uchishandisa tauro kana mamwe machira. Aya ma gadget anoshanda anogara achikosheswa, uye kune rimwe divi, ivo vanovaka chinzvimbo chechiratidzo pamusika.
Zvakakodzera kuteerera matauro akagadzirwa nekukurumidza-kuomesa zvinhu, izvo zvinoderedza njodzi yehunyoro, uye nekudaro - hwema husingafadzi. Micheka muchitoro chedu inochinjirwa kuti ishandiswe nekuwachwa patembiricha yakakwira.
Chiratidziro chinoshanda uye chinoshanda chekambani
Makisi akaitwa pahotera uye gastronomic machira anotaridzika kwazvo, nekudaro kukwezva maziso enharaunda. Uyu mukana wakasarudzika kune avo vanotarisira mufananidzo unoyevedza. Tine paki yedu yemuchina yakashongedzwa nemidziyo yepamusoro chete.
Kuve nemikana iyi yatinayo, isu tinokwanisa kuwana yekumaka mhedzisiro neakasarudzika kukwana mune zvese zvakadzama. Tinopa nzira dzakasiyana siyana mamaki, kunze kwekunge zvakanyanya kukurudzirwa machira emakomputa yemachira akakora, isu tinoitawo skrini yekudhinda uye sublimation.
Matauro z nezvakarukwa icho zvakare chikuru chipo zano. Ichi chakasarudzika, chakashongedzwa, asi zvakare chinoshanda chipo chinofadza wese anogamuchira. Yakashongedzwa neyepakutanga pateni, iyo logo ichasiya inonakidza ndangariro kwenguva yakareba.
Wese munhu anoshandisa matauro, akakosha muhupenyu hwezuva nezuva, saka munhu anoagamuchira anonyatso kuishandisa. Iko kushamisika kukuru, zvisinei nemwaka kana chiitiko, chinogona kunge chiri chipo chehama, vatengi kana vanoita basa.
Kambani yega yega inogona zvakare kushandisa mataira akadaro akanyorwa semubairo mumakwikwi mumasocial media - ndeimwe yemhando dzinoshanda uye dzinodhura-dzemakwikwi ekushambadzira.
Embroidery yekombuta pamachira
allegro akadhindwa matauromachira evacheche ane anodhindwamatauro ekambani ane anodhindaterry matauro ane chinyorwamatauro ehotera ane anodhindamucheche wekugezesa matauro ane anodhindaakadhindwa matauro ekugezaBhatiro matauro akadhindwa nemurume nemukadzibhatiro matauro ane chako chinyorwamatauro pakukumbira aine chinyorwaakadhindwa mapepa matauroakadhindwa matauro emahombekombematauro emahombekombe ane ako anodhindapromotional matauro ane anodhindamitambo matauro ane anodhindaMicrofiber matauro ane anodhindaakadhindwa matauromatauro ane allegro anodhindamatauro ane kudhinda kwedhijitarimatauro ane mazita akadhindwamatauro ane Krakow anodhindamatauro akadhindwa naamai nababamatauro akanyorwa nemurume nemukadzimatauro nechipo chakadhindwamatauro ane chinyorwa chemuchatomatauro akadhindwa pakukumbiramatauro ane akanyorwa poznańmatauro ane iyo Rybnik anodhindamatauro ane Warsaw anodhindamatauro ane Wroclaw anodhindamatauro ane chako chinyorwamachira evarume ane chinyorwamabhatiro ane chinyorwabathrobes neiyo Warsaw anodhinda